Root ary apetraho ny fanarenana amin'ny Xperia P | Androidsis
Victor morales | | Fanarenana Android, Android Root, Rom, Sony
Manoro anao ny lalana anio izahay faka ary apetraka a famerenana ao amin'ny Sony Xperia P. Ho an'ity dia tsy maintsy manana ny kinova farany an'ny firmware izahay, raha te hanana azy ianao dia afaka manaraka ny manaraka tutorial ary hahazo ny kinova farany izahay.
Inona no atao hoe miorim-paka amin'ny finday? Ny rafitra Android mazàna nohidiana amin'ny fomba izay tsy ahafahantsika mikasika ny 'fakany'. Ny fakany dia manome antsika fidirana amin'ireo faka ireo mba hahafahantsika manova ny rafitra fiasa araka izay tadiavintsika (Miaraka amin'ny fikarakarana MAFY hatrany). Amin'ny ankapobeny dia toy ny hoe tonga tao aminay ny Microsoft Windows niaraka tamin'ny lahatahiry 'C: Windows' ka tsy afaka mikasika azy isika ary miditra ao aminy.
Hanomboka ny tutorial izahay mba hahafahana manongotra ny Sony Xperia P. Ity tutorial ity dia miasa fotsiny voahidy bootloader. Ho an'ity dia tsy maintsy apetraka ny fitaovana Flashtool.
Kernel firmware .75
Kernel firmware .599
izao manaraka izao Archive
Hipoaka miaraka amin'ny fitaovana Flashtool ny kernel .599 isika
Hanomboka indray ny finday izahay rehefa vita ny fizotrany
Hamoaka ny fisie izay noidininay tamin'ny 7zip izahay ary hanatanteraka azy.
Hisafidy ny safidy laharana 1 isika ary hampifandray ny finday amin'ny alàlan'ny mode debugging USB.
Ny safidy hamerenana backup dia hiseho amin'ny finday ary homenay anao hamerina.
Hiandry ny famerenan'ny finday indray izahay, hizaha fa manana ny programa SuperSu napetraka ary hamono ny finday.
Ankehitriny dia manazava ny kernel izahay .75
Manantena izahay fa hifarana ny fizotrany ary hamerina hamerina ilay finday izahay ary hampiorina azy io.
Inona no atao hoe fanarenana? Izy io dia menio ahafahantsika manova ny ampahany amin'ny rafitra. Afaka mampihatra MODS isika, mamafa ny angona (WIPE), mametraka ROMS, manao BACKUPS, sns.
Miorim-paka ny finday
Misintona ny fisie teo aloha izahay
Mamoaka azy amin'ny 7zip izahay
Izahay dia manatanteraka ny fisie izay alainay
Mampifandray ny findainay amin'ny Mode Debugging USB izahay
Avelantsika ny programa hamita ny fizotrany
Vantany vao vita ny fizotrany dia averinay indray ny finday.
Mba hidirana amin'ny fanarenana dia tsy maintsy averintsika indray ny finday ary rehefa mipoitra ny sary famantarana Sony dia tsindrio matetika ny fanalahidy midina.
Raha te hahalala voambolana bebe kokoa momba ny Android ianao dia afaka manatona ny anay Rakibolana Android.
Fanazavana fanampiny - Ampidiro ny Xperia P, Rakibolana Android
Fampidinana - Flashtool, Kernel .599, Kernel .75, File ho an'ny faka, File ho an'ny fanarenana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Sony » Xperia P, Root ary fanarenana
Franelleon dia hoy izy:
Namana ny file root dia simba.
Valiny tamin'i Franelleon
Victor morales dia hoy izy:
Misaotra nanoro hevitra, nampakatra ny rakitra indray.
Valiny tamin'i Victor Morales
Luis Castaneda dia hoy izy:
Inona no ataoko raha ny dingana voalohany rehefa te-handrehitra azy dia mijanona amin'ny logo Sony ary manomboka indray
Valiny tamin'i Luis Castañeda
Josetri dia hoy izy:
Manana ny kinova 6.1.1.B.1.54 aho, mitovy ihany ve ny dingana? Misaotra anao
Valiny tamin'i Josetri
Eny, miaraka amin'ireo kinova farany azonao ampiasaina ity fomba ity
Misaotra, fa mila mampiasa ilay rakitra .54 ve aho sa manatsara ny .75?
Ny .75 no kinova farany indrindra, manoro hevitra anao aho hanao izany amin'ny kinova, fa azonao atao koa ny manao izany amin'ny .54 amin'ny famafana ny boaty rehetra afa-tsy ny vanja
Efa nanao ny tutorial aho, saingy tamin'ny farany dia napetraka ny Super, fa ny kinova dia nijanona tamin'ny .54. Ahoana no ahatongavako amin'ny .75? MISAOTRA
Atsofohy ny firmware .75 ary avereno ampiasaina ity tutorial ity
Efa vitako in-2 io ary tsy afaka mankany .75, afaka manampy ahy amin'ny alàlan'ny paositra ve ianao azafady? sa mametraka tutorial hanavao? MISAOTRA
Manana ny lesona fanavaozana azy ianao amin'ny voalohany sy amin'ny farany amin'ny fizarana fampahalalana bebe kokoa
Misaotra betsaka! Sony Xperia P, nohavaozina, miorim-paka ary miasa tanteraka !!!
jescela dia hoy izy:
Salama Josetri, azonao atao ve ny milaza amiko ny nataonao raha nampakatra ny kernel .75? Salama.
Azonao atao ve ny manampy ahy hamerina amin'ny laoniny nomaniny ho solon'izay Sony mpiara-miasa amiko? Ny app sony dia tsy afaka manao izany ho ahy. Azo atao manuel, manana ny rakitra .dbk aho. MISAOTRA
Heveriko fa ny fomba tokana dia ny manokatra azy amin'ny WinRar ary mahazo izay ilainao
Tokony ho nampiasa fampiharana toa an'i Carbon ianao
Niasa tanteraka tamiko io. Misaotra betsaka. Mirary ny soa indrindra
Ruben Pardo dia hoy izy:
Manana ny flashtool amin'ny "fitaovana mifandray amin'ny maody flash" aho ary alohan'ny hilazany fa hamerina ny finday io nefa tsy ???? Inona no ataoko satria ataoko tsara daholo….
Manana ny xperia P miaraka amin'ny .54 aho
Valiny tamin'i Ruben Pardo
Milaza aminao izy fa hanangana azy io indray, saingy tsy tokony hatao izany
Manana olana aho rehefa te-hamaka azy io, dingana 4 sy 5 izy io, misafidy ny safidy 1 ary avy eo ampifandraisiko amin'ny telefaona finday ilay finday ary avy eo omeko miditra ary milaza amiko izy fa tsy hitany ilay telefaona finday ary mamoaka ilay programa izy, ataoko tsara ny zava-drehetra fa izany foana no mitranga amiko, ampio, tiako ny mametraka crème jelly.
Ivan Rocha dia hoy izy:
Salama, manao ahoana ianao, nohavaoziko sy miorim-paka, ary miasa tsara ny Xperia P, manana fisalasalana ihany aho, raha te-hanala ny faka sy ny fanarenana hametraka ilay kinova avy amin'ny ozinina aho, inona no tsy maintsy ataoko , ny finday dia avy amin'ny telcel
Valiny tamin'i Iván Rocha
ary ho an'ireo ekipa TSY voasakana?
Izy io dia niasa lavorary ho ahy, misaotra 😀
Jordan Qüiros dia hoy izy:
Ireo zavatra ireo dia natao ho an'ny jelly
Valiny tamin'i Jordan Qüiros
Selma dia hoy izy:
Salama, ity fomba ity dia azo atao raha efa manana ny xperia p misy jelly bean aho? Io no tadiaviko fa miorim-paka ary tsy nahazo. Misaotra
Mamaly an'i selma
Pema dia hoy izy:
Valiny amin'i Pema
maik dia hoy izy:
kernel 599 manome lesoka !!!! mahatonga ny sela hamerina tsy tapaka. Azafady mba amboary ny FTF
Mamaly an'i maik
raul miranda dia hoy izy:
Salama, jereo, manana pro selfie sony xperia aho ary tsy mahita rohy hametrahana ny fomba fanarenana, ny findaiko, adinoko ilay sefo, manantena aho fa afaka manampy ahy ianao.
Mamaly an'i raul miranda
Ny vahaolana tsara indrindra hanavotana ny Samsung Galaxy S3 anao amin'ny fahafatesana tampoka atahorana
Samsung Galaxy S4, fanarahana maso hanodina pejy?